VIDEO:Al-Shabaab oo Muqdisho dhuulotus ciidan ku sameysay hanjabaadna soo… – SBC
VIDEO:Al-Shabaab oo Muqdisho dhuulotus ciidan ku sameysay hanjabaadna soo…
Xarakada Al-Shabaab ee dagaalka kala soo horjeeda ciidamada AMISOM & kuwa dawlada KMG Soomaaliya ayaa dhoolotus ciidan oo ay ku sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho waxay ku sheegeen inay sii wadi doonaan dagaalka isla markaana aanay ka bixin guud ahaan magaalada.
Madax ka tirsan Shabaabka oo Muqdisho kula hadlay boqolaal qof oo ay kala qayb galeen tukashadii salaada ciida oo ay ku oogeen duleedka Suuqa Xoolaha ayay sheegeen in ka bixistii furimaha dagaalka ee Muqdisho qaybo ka mid ah ay aheyd “Xeelad dagaal” balse waxay xuseen inay sii wadi doonaan dagaalka oo ay ka taliyaan degmooyin ka mid ah magaalada Muqdisho.
“Waxaan ku sugunahay degmooyin muhiim ah oo ka mid ah Muqdisho sida Huriwaa & Kaaraan mana jirto inaan ka wada baxnay Muqdisho waxaana hada wajihi doonaa dagaalo rogaal celis ah” ayuu yiri Sheekh Maxamuud xasan Cumar oo ah waaliga Wilaayada Gobolka Banaadir ee Shabaabka.
Warbixino muuqaalo ah oo laga baahiyey qaar ka mid ah telefishinada caalamiga ah ayaa laga daawaday cutubyo ka mid ah xarakada Shabaabka oo dhuulotus ciidan sameynaya isla markaana soo bandhigaya hub ay ka mid yihiin garneylada garbaha laga tuuro & boobayaasha sida Dhashiikaha.
Cutubyo ciidan ee Shabaabka ayaa waxay socod ku soo mareen qaybo ka mid ah xaafada Huriwaa & Suuqa xoolaha iyagoo lugeynaya dushana ku sida hub cusub.
Docda kale Afhayeenka Shabaabka Sheekh Cali Maxamuud (Sheekh Cali Dheere) ayaa isaguna geestiisa sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka uu ku sheegay in uu yahay mid ka dhan ah cadowga Islaamka.
“Kuwa badan oo mujaahidiin ah ayaa dhintey oo uu ka mid yahay Bin Ladin, waxaase jira ardeyadiisii oo wali diyaar ah inay sii wadaan halganka jihaadka, Mujaahidiinta ILAAH ayaa siiyey inay doortaan hogaamiye kale Eyman Al Zawaheri in uuna sii wado halgalkan dagaal ee ka dhanka ah cadowga ALLE, waana sii wadi doonaa dagaalka aynu ka ga horjeedo soo duulayaasha iyo kuwa la jira” ayuu yiri Sheekh Cali dheere oo sidoo kale sheegay in aanay jirin wararka ku aadan in uu u cararay magaalada Baydhabo.
Sidoo kale Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo ka mid ah saraakiisha sar sar ee ururka Al-Shabaab ayaa isaguna beeniyey in uu baxsadey magaalada Baydhabo waxaana uu sheegay inay diyaar u yhiin inay sii wadaan dagaalka.
“Horta ma la idin sheegay Muqdisho waa laga cararay ayaa la yiri, aniga xataa waxaa ley dhahay Baydhabo ayuu u cararay, kan ma aniga mise waa mid kale, wax carar la yiraahdo ma jiro, kaliya meel un baa la isku qeybiyay, inshaa allaah Guusha waa soo dhowdahay”ayuu yiri Abuu Mansuuur oo dhoola cadeynayay.
Hadaladan ka soo baxay saraakiisha Shabaabka & dhuulotuska ciidan ee ay soo bandhigeen wuxuu muujinaya inaanay wali fari ka qodneyn in uu dhan u dhaco xaalka siyaasadeed & kan dagaal ee Soomaaliya, iyadoo dawlada KMG ay horey ugu dhawaaqdey in uu ay jabeen Shabaabku oo ay Muqdisho ka taliso dawlada KMG Soomaaliya.
Video ku saabsan dhoolatuska Shabaabka link hoose ka daawo.
maansha alah waan kufarax sanahay in ay soo noqdaan ciidamada alsha baab al mujaahidiin oo surka kajaraan ciidamada amison iyo burundi mansha allah